नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ? :: डा सिपी सेडाई :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ?
डा सिपी सेडाई आइतबार, फागुन २९, २०७८, २२:११:३३
एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने रोगका बिरामी अँध्यारोमा डराउँछन। झ्यालढोका लगाउँदा आफू निसासिएजस्तो ठान्छन्। डराएर एक्लै वस्न सक्दैनन्। पुरानो अन्धविश्वासले गर्दा रात वढ्दै जाँदा भूत, वोक्सी आदि आउँछ भनेर डराउँछन्। तर त्यस्तो केही भएको हुँदैन। कोही निद्रामा वेसरी घुर्ने गर्छन्। मोटो शरीर, कम शारीरिक व्यायाम र रक्सी सेवनले गर्दा प्रायः यस्तो भएको हुन्छ। रात लामो हुँदा शरीरको मेलाटोनिन भन्ने हर्माेन वढी प्रवाह हुँदा जाडो महिनामा कसैमा डिप्रेसन रोग देखिएको छ। सामान्य निद्रा नपर्दैमा औषधि लिनु हुँदैन। औषधिबिना गरिने उपचार सफल नभए मात्र औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
-(डा सेडाई नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन्।)